Iziphathimandla ZaseThai Zithola Izibalo Zama-Anime Ezingama-300 Ekuqothulweni Kwezidakamizwa $ 50K - Okunye
Iziphathimandla ZaseThailand Zithatha Izinombolo Zama-Anime ezingama-300 Ekuqothulweni Kwezidakamizwa, Kubiza u- $ 50,106 +
Ngesikhathi secala lezidakamizwa, enye yezinto eyinhloko eyehla ukuhlaselwa kwezidakamizwa. Futhi ngemuva kokuthi konke kushiwo futhi kwenziwe, bangahlangabezana nokuthize okuthile.
Ya uyazi, ezinye izinto ngaphandle kwezidakamizwa nokuthi yini hhayi.
Kulokhu eThailand okwenzeke ukuthi kube yizibalo ze-anime.
Izibalo zama-Anime ezingama-300 ezibiza ngaphezulu kwe- $ 50K
Ezinye zezibalo ze-anime okukhulunywa ngazo zivela:
Ngabalingiswa abanjengoMonkey D Luffy engomunye wezinto ezinhle kakhulu.
Indali isuswe yibhodi lezidakamizwa laseThai
Njengoba kuchazwe nguPattaymail:
'Izibalo zezenzo ezivela emidlalweni egqwayizayo nakumabhayisikobho afana neNaruto, iDrag Ball, i-Iron Man, iSpider-Man, iTransformers, neMasked Rider, abanjwe ngamacala ezidakamizwa bathengiswe endalini yiHhovisi leNarcotics Control Board (ONCB) umzuliswano wokuqala wezindali kulo nyaka.
Izindatshana ezingama-286 bezihlukaniswe njengezingakulungele ukuqhubeka nokugcinwa yi-ONCB, ngamanani ento ngayinye esukela ku-200 bah kuye ku-35,000 baht.
Into eshisa kakhulu endalini bekuyisenzo sesenzo esingu-1: 1 sikaLuffy, umlingiswa oholayo ovela ku-One Piece animation, eza nentengo yokuqala engama-35,000. Lesi sibalo sathengiswa ngo-111,000 baht kuMnu Chakrit Boonlapho, ongumdlandla wesenzo. ”
Ngokwesilinganiso esingeziwe, iziphathimandla ezinhle zilandela imigomo yokuvikela ukusabalala komngani wethu omuhle u-COVID-19.
Futhi yilokho kuphela akubhalile.
Intombi ilahla kude ama- $ 3,300 amaNezuko Anime Amanani, Ngakho-ke Isoka Liyahlukana Naye
Izinombolo ze-15 Kawaii Anime Ezizokwenza Ube Namahloni
IBanPresto Demon Slayer Tanjiro Kamado Figure Thenga nge-Amazon Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. I-Banpresto Hatsune Miku Racing 2016 Ukyo (Bandai 25926) Thenga nge-Amazon Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
angilona iqhawe futhi ngeke ngiphinde ngilwe